Madaxweyne Siilaanyo Oo Hadal Dardaaran Ah Ka Jeediyay Munaasibada Dafcadii 14aad Ee Jaamacadda Hargeysa | #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Madaxweyne Siilaanyo Oo Hadal Dardaaran Ah Ka Jeediyay Munaasibada Dafcadii 14aad Ee Jaamacadda Hargeysa
Madaxweynaha iyo masuuliyiinta kale ee ka qaybgalay dafcadii 14aad ee Jaamacadda Hargeysa ka qalin jebisay.
Hargeysa(ANN)-Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), aya khudbad uu maanta ka jeediyay munaasibad loo qabtay Dafcadii 14aad ee Ardayda ka qalin jebisay Jaamacadda Hargeysa kaga hadlay arrimo baddan, wuxuuna khudabadiisa ku bilaabay sidan: –
“Waxaan jecelahay, in aan Madashan uga jeediyo, mahadnaq iyo salaan xambaarsan, nabadgelyo iyo naxariis EEBE dhammaan Mudanka, Marti-sharafta, Macalimiinta, Madaxda Jaamacadda iyo Masuuliyiinta kala duduwan, “Assalamu Calaykum Wa Raxmatullaahi Wa Barakaatu”.
Mudanayaal iyo Marwooyin, ugu horreyn, milgo iyo maamuus weyn bay ii tahay, in aan idinkala soo qayb-galo Xafladda Qalin Jebinta Dufcadda 14aad ee Jaamacadda Hargeysa.Mar labaadka, waxaan jecelahay, in aan halkan ka hambalyeeyo, dhammaan ardayda maanta qalin jebisay iyo waalidkoodii soo gargaaray, iyo cid kasta oo gacan ka geysatay, guushan ay gaadheen geesiyaashan aynu goobtan ku gelbinayno.
Sidoo kale, anigoo ka faa’iidaysanaya munaasibaddan qiimaha badan, waxaan jecelahay in aan si weyn ugu bogaadiyo Guddoomiyaha, Guddoomiye Xigeenka, Macalimiinta, iyo dhammaan Maamulka Jaamacadda Hargeysa, hamiga waxqabad iyo horumarka ballaadhan ee ay ku tallaabsadeen, muddadii ay xilka hayeen.
Duco-qabayaal, waxaan qirayaa, in aad Jaamacadda Hargeysa ku samayseen isbeddel weyn iyo tayayn laxaad leh. Waxaan qirayaa, in aad xaqiijiseen, in badan oo ka mid ah humaagii maskaxdayda ku sawirnaa hoggaamiye ahaan, iyo himilooyinkii Xukuumadda Xisbiga Kulmiye.
Tan iyo intii bini-aadamku ifka ku tarmay ee kala yeeshay degelo u kala gaar ah, waxaa markhaati ma doon ah, in uu kala tamar iyo tacab batay, ama kala raganimo roonaadey. Haddaba, waxaa is weydiin mudan, Adanaha ma waxaa is dhaafiyey dhulka ay ku kala nool yihiin? Ma waxaa is dhaafiyey midabka, madaahiibta iyo luqadaha ay awoowayaashood ka dhaxlaan?
Waxaa hubaal ah in jawaabta saxda ahi aanay midna ahayn intaa, balse waxa qudha ee ay ummaduhu isku dhaafeen waa heerka korodhka aqoonta. Heerka koboca dhaqaalaha dal leeyahay, waxay ku xidhan tahay, hadba heerka korodhka aqoonta dadkiisu yeesho. Sidaa darteed, waxaa qaran ahaan inagu waajib ah in aynu xoog saarno, noocyada kala duduwan ee aqoonta iyo waxbarashada.
Mudanayaal iyo Marwooyin, Anigoo ka duulaya aragtidan siyaasadeed ee kor ku xusan, oo ahayd humaag maskaxdayda ku sawirnaa hoggaamiye ahaan muddo dheer, Anigoo ka duulaya himilooyinkii Xisbiga Kulmiye, ee uu udub dhexaadka u ahaa horumarinta aqoonta, iyo tayeynta adeegyada waxbarashada, waxaannu Xukuumad ahaan xoog saarnay, sidii looga midho dhalin lahaa mabada’an ku fadhiya muhimadda weyn
Muddadii toddobada sannadood ahayd, ee aannu talada dalka haynay, Xukuumadda Xisbiga Kulmiye ee aan odayga u ahaa, waxay ka samaysay isbedde weyn dhinac kasta oo nolosha bulshada ah, gaar ahaan dhinaca waxbarashada. Bal in yar ila wadaaga xogtan kooban ee ka markhaati kacayasa hadalka aan kor ku sheegay, “illayn Beenaale Markhaatigiisa, ayuu fogeeya’e”.
Markii Xukuumadaydan talada la wareegtay, dalka waxaa ka jiray 51 Dugsi Sare, iyo 531 Dugsi Hoose/Dhexe, oo la dhisay muddo 49 sannadood gudahood 1960 – 2010. EEBE Mahadii, muddadii 7 sanno ahayd, waxaannu dhisnay 61 Dugsi Sare, iyadoo tirada dugsiyada sare yihiin maanta 112 dugsi, waxa kordhay %54.
Dhinaca kale, waxaannuu dhisnay muddadaa 397 dugsi Hoose-Dhexe, iyadoo tirada dugsiyada Hoose-Dhexe maanta yihiin 928 dugsi. Waxaannuu ka dhignay waxbarashadii Hoose-Dhexe bilaash, si loo wada awoodo, taasi waxay keentay in ay korodho tiradii ardaydu, dugsiyadana la kordhiyo.
Tirada ardayda dhiganaysay badhtamihii 2010-kii dugsiyada Hoose-Dhexe waxay ahayd 156,699 (Boqol iyo Lix iyo Konton Kun, Lix Boqol iyo Sagaal iyo Sagaashan Arday). Halka 2017-ka ay dhiganayaan 267,484 (Laba Boqol iyo Toddoba iyo Lixdan Kun, Afar Boqol iyo Afar iyo Siddeetan Arday). Waxa kordhay 110,785 (Boqol iyo Toban Kun, Toddoba Boqol iyo Shan iyo Siddeetan Arday), oo u dhiganta %42.
Dugsiyada Sare, waxaa dhiganayey badhtamihii 2010-kii, 30,532 (Soddon Kun, Shan Boqol iyo Laba iyo Soddon Arday). Halka ay dhiganayaan 2017-ka, 59,512 (Sagaal iyo Konton Kun, Shan Boqol iyo Laba iyo Toban Arday). Waxa kordhay 28,980 (Siddeed iyo Labaatan Kun, Sagaal Boqol iyo Siddeetan Arday), oo u dhiganta %49.
Dhinaca Macalimiinta xilligaa sida rasmiga u shaqaynaysay, waxay ahayd 2,351 macalin, kuwaas oo la kala hawlgeliyey 19kii sannadood ee Jamhuuriyadda Somaliland waqtigaa jirtay. Maanta Macalimiinta sida rasmiga u diiwaangashan, waa 5,345 macalin, waxaannu kordhinay 85-kii bilood, 2,994 macalin, taas oo u dhiganta korodh ahaan %44.
Siyaasadda xoogga lagu saaray waxbarashada qaybtii hoose, waxay keentay in ay badiso ardaydii Jaamacadaha dalka soo gelayey, ama ka qalin jebinayey, taas oo ay ka markhaati tahay warbixinta Wasaaradda Waxbarashadu jeedisay. Dhinaca kale, waxaa hubaal ah in muddadaa Jaamacadaha waaweyn ee dalku kor u kac iyo horumar weyn ku yimi, si gaar ah waxaan u xusi karaa una ammaanayaa Jaamacadda Laascaanood (Nugaal University), Jaamacadda Burco, Jaamacadda Camuud iyo Jaamacadda Hargeysa, oo labduba tusaale fiican iyo bar-tilmaameed u ah Jaamacadaha Bariga iyo Badhtamaha Africa.
Anigoo munaasibadda ka faa’iidaysanaya, waxaan guud ahaan u mahad-celinayaa, hay’adaha caalamiga, kuwa Qaramada Midoobay iyo dalalka naga caawiyey horumarka dhinaca waxbarashada. Si gaar ah, waxaan halkan ugu mahadnaqayaa dalalka Midawoga Yurub, Shirkadaha dalka ee ka mid yihiin Dahabshiil Group, Telesom, Somaliland China Hono Group, Duqa Caasimadda Hargeysa, Madaxda Wasaaradda Waxbarashada, mashaariicda ay ugu deeqeen Jaamacadda Hargeysa iyo kaalmada ay ugu deeqeen.
Horumarinta Jaamacadaha dalka, waxba kalamaannu hadhin, taana waxaa markhaati ka ah, isbeddelka ku yimi iyo heerka ay marayaan. Jaamacadda Hargeysa, ma muran baa ka taagan in uu faraq weyni u dhexeeyo shalay iyo maanta. Waxay Soomaalidu ku maah-maahdaa: “Daayeer baa lagu yidhi waar qadhaab ka waran? Wuxuu yidhi tunkayga iyo tagoogayga ka eeg”. Sidaa darteed, waxaan leeyahay wixii Jaamacaddan u kordhay muddadii aan qaranka hoggaaminayey, saaka tunkeeda iyo tagoogadeeda ayay ka muuqata, tigaadi iyadaa laacda’e. Maalmahan soo socda, waxaannu dhisaynaa Xarunta sheybaadhka Caafimaadka oo ku kici doonta lacag dhan $200,000 (Laba Boqol oo Kun oo Dollar).
Duco-qabayaal, Ilaahay mahaddii nasiib waxaad u yeelateen in aad wax ku barataan dalkiinii hooyo iyo baradii aad ku noolaydeen. Aqoontii maydaan dhammayn ee hada ayaa bilaabaysaan oo saaka waxaa la idin siiyey muftaaxii cilmiga ee dadaalka halkaa ka sii wada. Waxaan kale oo idin leeyahay deyn badanbaa idinku maqan ee dalka iyo dadka waxa ku soo celiya, waxaa ugu yar waxa aad qaban kartaan aqoon fidin iyo diyaarinta daraasado climiyeed oo ummad ahaan wax in tara.
Gun iyo Gebogabo
Waxaan idinkula dardaarmayaa, in aad ka qayb qaadataan dedaalkada madaxdu ugu jirto, sida:
Adkaynta nabadgelyada iyo midnimada dalka iyo dadka.
Dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ah, si loogu abuuro dhalinyarada fursado shaqo, dhinaca kalena loo helo koboc dhaqaale.
La dagalaanka qabyaaladda iyo kala qoqobka bulshada.
La dagaalanka faafida balwadaha iyo dhaqamada xun xun ee dabar-goyen kara bulshada.
La dagaalanka tahriibka, doolka iyo dal nacaybka, taas oo loo baahan yahay in aynu aaminno dalkeenna hooyo, waxana qabsanno.
Ugu dambayn, idam EEBE, dalka dhawaan waxaa ka dhici doonta dorashadii Madaxtooyada, ardayda jaamacaduhuna waxay ka mid yihiin halbawla-yaasha gacan siiya Guddida Doorashooyinka, sidaa darteed, waxaan idinkula dardaarmayaa in aad xilka u gudataan si sharciga waafaqsan oo xilkasnimo iyo xaqsoor ku jiro”.
Alleheen Baa Mahad Leh.
#1Araweelo News Network > Warar > Madaxweyne Siilaanyo Oo Hadal Dardaaran Ah Ka Jeediyay Munaasibada Dafcadii 14aad Ee Jaamacadda Hargeysa